झापाका कुखुरापालक किसान आन्दोलनमा – NewsAgro.com
December 18, 2018 newsagro0Comments किसान, कुखुरा, चल्ला, झापाका कुखुरापालक किसान आन्दोलनमा, दाना
यो समाचार 124 पटक पढिएको
झापा । झापाका कुखुरापालक किसान आन्दोलित बनेका छन् ।
कुखुराको चल्ला र दानाको मूल्यमा अत्यधिक वृद्धि भएको तथा आफूहरूले उत्पादनको गरेको कुखुराको उचित मूल्य नपाएको भन्दै उनीहरू आन्दोलित भएका हुन् ।
केही समयअघि प्रतिबोरा (५० केजी) दानामा रू ५० वृद्धि गरिएको र त्यसलगत्तै रू ७५ ले पुनः वृद्धि गरिएको सचिव उप्रेतीले बताउनुभयो । गर्मी महीनामा चल्ला बचाउनै मुस्किल पर्ने र जाडोमा चल्ला खरीद गर्न नसकिने गरी मूल्य बढ्ने गरेको बताउँदै उहाँले भन्नुभयो, “यसबाट किसान मारमा परेका छन्, त्यसमा पनि एक दिने चल्ला ३५ ग्रामको हुनुपर्नेमा २५/३० ग्रामको मात्र हुन्छ ।”
किसानलाई जिउँदो कुखुरा उत्पादनमा प्रतिकेजी रू १६५ लाग्ने गरेको सङ्घका सदस्य रमेश भट्टराईले बताउनुभयो । “अहिले किसान प्रतिकेजी १६५/१७० रुपैयाँमा कुखुरा बेच्न बाध्य छन्”, उहाँले भन्नुभयो, “बजारमा २८०/३०० रुपैयाँ प्रतिकेजी मासु बिक्री भइरहेको छ ।”
सीमा क्षेत्रबाटभारतीय कुखुरा आयात भइरहेको भन्दै सङ्घले जिल्ला प्रहरी कार्यालय झापालाई ध्यानाकर्षणसमेत गराएको छ भने जिल्ला प्रशासन कार्यालय झापामा ज्ञापनपत्र समेत बुझाएको छ । आफ्नो समस्या समाधानका लागि पहल गरिदिन जिल्लाका चार स्थानीय तह शिवसताक्षी, बिर्तामोड, भद्रपुर र दमक नगरपालिकामा ज्ञापन पत्रसमेत बुझाइएको सदस्य भट्टराईले जानकारी दिनुभयो ।
← होसियार ! कहि तपाईको दूधमा थुनेलो रोग लागेको दूध त् छैंन ?
‘किसानसंँग वैज्ञानिक प्रत्यक्ष जोडिनुपर्छ’ : कृषिमन्त्री →
ललितपुरको कफीको सिन्दुरे रोग देशभर फैलिंदै
साढे नौं करोड खर्चेर इटलीबाट स्याउका ९० हजार बिरुवा आयात गरिँदै